Taco ညီအစ်ကိုများ | New Slots No Deposit Online | CoinFalls အွန်လိုင်းကာစီနို
ဒီ slot ပါ၏ရက်ကြောင့်မှားယွင်းစန်တာမာရီယာ၏မက္ကဆီကန်မြို့တစ်နောက်ခံများ. အဘယ်သူမျှမသိုက်အွန်လိုင်းမြို့လုံးရှိလူနှင့်ညီအစ်ကိုသုံးယောက် Pepe ၏ Taco ထဲမှဆယ်နှုတ်သောသူသည်ဆိုးသောဗိုလ်ကြီး Diaz ရှိကွောငျးဇာတ်လမ်းအပေါ်အခြေခံသည်အသစ် slot နှစ်ခု, Pico နှင့် Paso သူ့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်မြို့ရိုးရာကူညီပေးနေနေကြတယ်. ဗိုလ်ကြီး Diaz သည်ပင်ထောင်ထဲမှသူတို့ကိုလိုကျတယျသူတို့သညျမမှအမြို့သူတို့ကိုယ်သူတို့တက်လှတျမွောကျနှင့်ကယ်ဖို့သူတို့ရဲ့ကျေးကိုသုံး. ဤကမ်းလှမ်းချက်အပေါ်အွန်လိုင်းအကောင်းဆုံးသစ်ကို slot နှစ်ခုမျှသိုက်ဖြစ်ပါသည်.
Taco ညီအစ်ကိုများ slot နှစ်ခုရဲ့ developer များအကြောင်း
ဒီ slot ကအတို့တွင် 8 ဆတ်စတူဒီယို developer များ၏ဖန်တီးမှု. အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲရေးသူတစ်ဦး Set-up တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမျိုးနှင့်အတူဤဆောင်ပုဒ်ကိုထပ်နေသူများကဖန်တီးထားပါတယ်. သူတို့ကနောက်ပိုင်းတွင်သူတို့ကတည်းကအတူတက်လာကြပြီအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းဟာ host အတူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသည့်အသိအမှတ်ပြုမှုရာ၌ခန့်ထားပြီ 2012.
အခုအသစ် slot နှစ်ခု၏ထူးခြားသောအရောင်းရဆုံးစျေးနှုန်းအဘယ်သူမျှမသိုက်အွန်လိုင်းညီအစ်ကိုသုံးယောက် Diaz မှတဆင့်၎င်းတို့၏ရိုင်းထွက်ပေါက်အင်္ဂါရပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လမ်းလျှောက်လွင်ပြင်ဖြစ်လာရှိရာ၎င်း၏အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ feature ဖြစ်ပါတယ်. သငျတို့သညျအလှနျအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေ Senorita တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းလည်းရှိ, who isafriend of the three brothers and helps them to escape in the feature. အထိုင်တစ်ဦးနှင့်အတူလုပ်ကြောင်းထက်အခြား5စံရက်ကြောင့်မှားယွင်းအစုံ. ရှိပါတယ် 243 အဘို့ကိုလိုက်ရှာဖို့ paylines. အရက်ကြောင့်မှားယွင်း adorning သင်္ကေတတစ်ခုဂစ်တာများမှာ, tequila တစ်ပုလင်း, တစ်ဦးရှားစောင်းပင်စက်ရုံ, တစ်ဂေါ်ပြား, တစ်သတ္တုတူးဖော်ရေးဆီမီးခွက်သင်္ကေတများ.
တစ်ဦးသည်အသုံးအစ်ကိုရင်ဆိုင်နေရဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမဆိုတစ်တန်းတစ်ငါး 400 ရောင်စုံစာလုံး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏အကြွေစေ့ win.The ဂိမ်းရဲ့နာမည်ရိုင်းသင်္ကေတဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဆုကြေးငွေသင်္ကေတများ မှလွဲ. အပေါငျးတို့သညျအခွားသင်္ကေတများနေရာတွင်အစားထိုးနိုင်.
သငျသညျကိုသာ 2nd နှင့် 4th ရက်ကြောင့်မှားယွင်းသောအခါသင်ပြုအပေါ် Re-လည်သင်္ကေတဆိုတာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်, သင်တစ်ဦးအခမဲ့ Re-လှည့်ဖျားပေးထားပါလိမ့်မည်. အစက်အပြောက်3ပြန်လည်လှည့်ခြင်းများစဉ်အတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံသင်္ကေတသင်တို့အဘို့ရိုင်းနဲ့ Escape feature ကို activate လိမ့်မည်. ကျပန်းတစ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူကိုကမ်းလှမ်းသောအခမဲ့မြှောက်ကိန်းရှိပါသည်, ဆုကြေးငွေပတ်ပတ်လည်အတွင်းမှာကိုအနိုင်ပေးများအတွက်. အဆိုပါဆုကြေးငွေပတ်ပတ်လည်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါ်တီးခတ်သည်. အဲဒီမှာတိုးပွားစေနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အများကြီးဆုကြေးငွေပတ်ပတ်လည်အတွင်းမှာတစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုတက်သည် spins. The betting range begins from 10p per spin and goes up to £50 per spin in this new slots no deposit online.
တိရိစ္ဆာန်အသံကို၏ပြီးပြည့်စုံသောတေးသံကိုဂိမ်းနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောထပ်တူပြုခြင်း၌ရှိ၏. သငျသညျအခြို့သောမြည်းအသွင်ဆောင်လာကြောင်းနှင့်နောက်ကွယ်မှတေးသီးသံအချို့သောငှက်များနားထောငျမညျ. အဘယ်သူမျှမသိုက်အွန်လိုင်းကာတွန်းတူသောကြည့်ပေးထားသင့်ဟောင်းကျောင်းကိုရက်ပေါင်းထပ်ခါထပ်ခါကြည့်စေမည်ဖြစ်သောခံစားရလျက်ရှိသည်ယခုအသစ် slot နှစ်ခု. ပိုပြီးင်အဘယျသို့, ထိုဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့လမ်းဖွင့်လာမယ့်မြောက်မြားစွာအခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးတိုးပွားစေရှိပါတယ်.